Mac OS, na aka nke ọzọ, bụ ihe magburu onwe sistemụ ji Apple Inc. na ọ bụ Mac PC na MacBook. Ọ nwere magburu onwe onye ọrụ interface na oké atụmatụ. Ọ ga-abụ kediegwu ọ bụrụ na anyị bịara nwee ike iji Android ngwa ọdịnala na Mac PC. Luckily, ọ bụ omume site na iji ihe emulator. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-amụta banyere ise kasị mma Android Emulators maka Mac.
Part 1. Gịnị mere na ị ga-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na Mac Part 2. Top 3 Android emulator maka Mac
Part 1. Gịnị mere na ị ga-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na Mac
Na-agba gburugburu 1.2 nde ngwa ọdịnala na Mac si Google Play Store.
Na-egwu tọn Android egwuregwu na ibu ihuenyo.
People, ndị na-emefu a ezigbo ego nke oge n'ihu desktọọpụ, ga-ahụ ya ọzọ adaba ọ bụrụ na ha bịara nwee ike iji ngwa ọdịnala dị ka WeChat, WhatsApp, Viber, Line wdg na ha Mac.
App Mmepụta nwere ike nwalee ha ngwa ọdịnala na desktọọpụ n'ihu na-ezipụ ya ndị Google Play Echekwala maka ọrụ akafiakde ese.
Ụfọdụ emulator akwado batrị na GPS wijetị. Ya mere, mmepe nwere ike nwalee ha ngwa dabeere na ịrụ ọrụ batrị na pụkwara anwale otú ha ngwa ga-arụ ọrụ dị iche iche Obodo ọnọdụ.
Part 2. Top 3 Android emulator maka Mac
BlueStacks App Player bụ eleghị anya ndị kasị ewu ewu emulator na-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na Mac. Ọ bụ maka ma Mac na Windows. Ọ na-emepụta mebere oyiri nke Android OS ngwa ọdịnala na ọbịa os. Ọ na-eji pụrụ iche "LayerCake" nkà na ụzụ na-enye gị ohere na-agba ọsọ android ngwa ọdịnala na PC gị na-enweghị ọ bụla mpụga Virtual Desktọpụ Ngwa. Ozugbo wụnye onye ọrụ nwere ike na-enwe Android egwuregwu na ngwa ọdịnala dị ka News Feeds, Social Network na nnukwu ihuenyo.
BlueStacks ịnọgide na-enwe esịtidem search njikwa na-enye ohere ọ bụla ngwa, ngwugwu faịlụ Ọkpụkpọ na-eji na-ekesa na wụnye ngwa na middleware na ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ, iji wụnye n'ime ya. O nwere ike ịbụ
.apk faịlụ nwere ike arụnyere n'ime BlueStacks si Mac nanị site abụọ na ịpị.
Ọ nwekwara ike mmekọrịta n'etiti ngwa ọdịnala na Mac na android ekwentị ma ọ bụ mbadamba site na wụnye BlueStacks Cloud Jikọọ na ngwa na Android Ngwaọrụ.
Ngwa nwere ike-oru kpọmkwem site Mac dashboard.
Ọ dịghị mkpa ka hazi ọzọ njikọ Ịntanetị dị ka ọ na-akpaghị aka na-akawanye Internet njikọ nke usu kọmputa.
BlueStacks App Player dị maka ma Windows na Mac.
Mgbe na-agba ọsọ mgbagwoju graphic ngwa ọdịnala ọ ada ada na-na-anabata ọsọ ọsọ na a n'oge ejiji.
Ọ na-adịghị ihe ọ bụla usoro iwepụ cleanly si usu kọmputa.
Ọ nwere ike na-ibudatara na ukara website nke BlueStacks. Ọ bụ nnọọ free.
Download BlueStacks maka Mac OS X si ukara website nke BlueStacks na wụnye ya ka ọ bụla ọzọ software na PC gị. Ozugbo arụnyere, ọ ga-buut elu ya Home ihuenyo. Site n'ebe ahụ i nwere ike ịchọta arụnyere ngwa, chọta ọhụrụ ngwa ọdịnala na "Top chaatị dị iche iche", search ngwa, play egwuregwu na mgbanwe ntọala. Òké ga-isi aka njikwa. Iji nweta Google Play ị ga-akpakọrịta a Google akaụntụ na BlueStacks.
Genymotion bụ a ngwa ngwa na ebube ọzọ emulator na ike ga-eji ike a mebere ebe Android. Ọ bụ ihe ndị kasị Android emulator n'elu ụwa. Ọ nwere ike na-eji na-ịzụlite, ule na-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na Mac PC. Ọ bụ maka Windows, Mac, na Linux igwe. Ọ dị mfe iji wụnye na nwere ike ịmepụta a ahaziri android ngwaọrụ. Ị pụrụ ịmalite multiple mebere ngwaọrụ n'otu oge. Ọ nwere pixel zuru okè arụmọrụ otú i nwere ike na-kpọmkwem gị UI development. Site na iji OpenGL osooso ya nwere ike nweta ihe kasị mma 3D arụmọrụ. Ya ozugbo nyere mebere ngwaọrụ sensọ na Genymotion sensọ. Ọ bụ evolushọn nke Android oghe isi oru ngo na-ama tụkwasịrị obi site banyere 300,000 mmepe gburugburu ụwa.
Best 3D arụmọrụ a na-enweta site na OpenGL osooso.
Akwado ihuenyo zuru nhọrọ.
Ike ịmalite multiple mebere ngwaọrụ n'otu oge. r
Ofụri Esịt dakọtara na ADB.
Dị maka Mac, Windows na Linux igwe.
Achọ mebere Igbe na-agba ọsọ Genymotion.
Apụghị idokwa Android igwe offline.
Genymotion nwere ike ibudata si ukara website nke Genymotion. Ọhụrụ version nke Genymotion bụ 2.2.2. Ị ga-ekpebi a ngwugwu na-ezukọ gị chọrọ.
1. Download Genymotion. Ị nwere ịmepụta otu akaụntụ ibudata ya.
2. Mepee .dmg installer. Ọ ga-wụnye Oracle VM Virtual Igbe dị na kọmputa gị.
3. Bugharịa ihe Genymotion na Genymotion Shell ka ngwa ndekọ.
4. Pịa akara ngosi si Ngwa ndekọ na ndị na-esonụ window ga-apụta
5. Iji tinye mebere ngwaọrụ click na tinye bọtịnụ.
6. Pịa na connect.
7. Tinye aha njirimara gị na paswọọdụ jikọọ Genymotion Ígwé ojii na pịa na connect. Mgbe ejikọta na Genymotion ígwé ojii na-esonụ ákwà ga-apụta.
8. Họrọ a mebere igwe na pịa Next
9. Nye a aha maka Virtual igwe dị ka n'okpuru wee pịa Next
10. Gị mebere ngwaọrụ ga-ugbu a ike ibudata na deployed. Pịa na imecha button mgbe ịga nke ọma nkenye ọnọdụ nke gị mebere igwe.
11. Pịa na Play bọtịnụ iji malite ọhụrụ mebere igwe na-enwe
Andy bụ na-emeghe isi emulator na-enye ohere Mmepe na ọrụ na-enwe ihe siri ike ngwa, na-enweta ha na otutu ngwaọrụ gburugburu, na kwụsị ịdị na mgbochi site ókè nke ngwaọrụ nchekwa, na ihuenyo size ma ọ bụ iche iche os. Onye ọrụ nwere ike imelite ha Android site Andy. Ọ na-enye enweghị nkebi mmekọrịta n'etiti desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaaka. Onye ọrụ nwere ike iji ha na ekwentị dị ka joystick na-egwu egwu egwuregwu.
Ọ na-enye a enweghị nkebi mmekọrịta n'etiti desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaaka.
Kwado Android OS update.
Kwado ngwa download ọ bụla na desktọọpụ nchọgharị iji Andy os.
Ekwentị mkpanaaka na ike ga-eji dị ka joystick na-egwu egwu egwuregwu.
Unlimited nchekwa mmeba.
Dịkwuo CPU ojiji.
Erepịakwa a otutu anụ ahụ na ebe nchekwa.
Ị nwere ike ibudata Andy si www.andyroid.net.
1. Download na wụnye Andy
2. Ẹkedori Andy. Ọ ga-ewe banyere a nkeji buut na mgbe ahụ, ọ ga-ahụ a welcome ihuenyo
3. Banye gị Google Akaụntụ na mezue ndị fọdụrụ nke na ntọlite ​​ihuenyo. Ị ga-jụrụ inye gị Google ozi akaụntụ 1ClickSync, ngwa na ka ị mekọrịta n'etiti Andy na ngwaọrụ mkpanaaka
Top 5 Free Antivirus maka Android
Best 5 Android Software ka Download
Top 5 Video Downloader maka Android
Top 5 Android ndi-ozi Download
Top 20 Free na akwụ ụgwọ Android égwu
Nyefee faịlụ site iPhone ka Samsung
Top 8 Android Kpọtụrụ Manager
Top 10 Android SMS Managers
Ihe niile ị ga-mara banyere Android Ngwaọrụ Manager
Best 4 Software nyefee faịlụ ka / si gị akporo ekwentị site na eriri USB
Olee otú iji tọghata AAC ka MP3 on Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Celtx maka Mac
Olee otú Naghachi ehichapụ nchekwa na Mac
> Resource> Mac> Best 3 Android emulator maka Mac na-agba ọsọ gị chọrọ Android égwu